Ukuphathwa kokungezwani komzimba nomzimba - GAAPP
Ikhaya>Kuyini ukungezwani komzimba nomzimba?>Ukuphathwa kokungezwani komzimba nomzimba
Ukuphathwa kokungezwani komzimba nomzimbaIpulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-07-01T12:46:42+02:00
Isinyathelo sokuqala nesibaluleke kakhulu ekuphathweni kwe-Allergy ukuvikela i-allergen. Ukuvimbela ukuvezwa kwama-allergen kuyisihluthulelo sokulawula ukungezwani komzimba. Uchwepheshe wezempilo angakwazi ukweluleka ngokugwema izixwayiso zomzimba ngqo ngesimo sakho.
Izidakamizwa ziyasebenza ekulawuleni nasekwelapheni izifo ezibangelwa ukungezwani komzimba kepha azikulaphi ukungezwani komzimba okuyizimbangela. Kakhulu ukuhlanganiswa kwezindlela ezimbili kuzoholela ekuthuthukeni okukhulu kwezimpawu zomzimba.
Ukunciphisa ubungozi bokungazwani ngokugwema i-allergen, lapho kungenzeka khona.
Imithi yokwelashwa ukunciphisa izimpawu kubandakanya imishanguzo kanye ne-immunotherapy.
Ukuphendula okuningi kokungezwani komzimba kumnene futhi akubangeli ukusongela okusongela impilo, noma kungaba yinkinga kakhulu esigulini. Inani elincane labantu lingathola ukusabela okweqile okubizwa ngokuthiwa i-anaphylaxis.
Lapho ungeke ukwazi ukugwema iziphikisi, kunemithi eminingi engasiza ukulawula izimpawu zokungezwani komzimba. Ama-decongestants futhi ama-antihistamines yizona ezivame kakhulu imithi yokungezwani komzimba. Zisiza ukunciphisa ikhala eligcwele, ikhala eligobayo, ukuthimula nokunwaya. Eminye imithi isebenza ngokuvimbela ukukhishwa kwamakhemikhali abangela ukungezwani komzimba. I-Corticosteroids iyasebenza ekwelapheni ukuvuvukala emakhaleni akho. Lezi zindlela zokwelapha zilawula izimpawu kanye nokusabela; abaselaphi lesi sifo.